समाजले पचाउने खालका भिडियोमा मात्र अभिनय गर्छु : मोडल पवित्रा थापा-Nepali online news portal
समाजले पचाउने खालका भिडियोमा मात्र अभिनय गर्छु : मोडल पवित्रा थापा
प्यूठानमा जन्मेकी पवित्रा थापापछि बुटवलमा बसाइ सरेपछि पढाइँसँगै नृत्य क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हुन् । उनी २ वर्षको संघर्षपछि हिट मोडल बन्न सफल भएकी छिन् । उनी भन्छिन् अबको १–२ वर्षमा नेपालको चर्चित मोडल बनेर देखाउने बताए । उनले आफूले समाजमा विकृति आउनेखालको गीतमा मोडलीङ नगर्ने बताएकी छिन् । मोडल पवित्रा थापा आफ्नो नित्य क्षेत्रमा आमा–बाबाको सहयोगले गर्दा आज यहाँसम्म आइपुगेको कुरा फरकपत्रको प्रतिनिधि कविता लामिछानेसँगको चियागफमा बताएकी छिन् ।
पवित्राजी तपाईंको कलाकारिता जीवन कहिले र कसरी कहाँबाट सुरु भयो ?
राष्ट्रिय लोक दोहोरी प्रतिष्ठान रूपन्देहीको उपाध्यक्ष प्रचण्ड जिसी हुनुहुन्छ । उहाँको प्रेरणाबाट मलाई यो क्षेत्रमा लाग्न प्रेरणा मिलेको हो । रूपन्देहीमा एउटा कार्यक्रम भएको थियो । मैले पनि भाग लिएँ । म त्यसमा प्रथम भएकी थिएँ ।
प्रचण्ड दाइले मलाई धेरै कलाकारहरूको बीचमा ‘तिम्रो कला क्षमता एकदम राम्रो रहेछ’ भनेर हौसला दिनुभयो । मेरो पनि कलाकारितामा लाग्ने सानैदेखिको रुची थियो र उहाँले पनि हौसला दिनुभयो । यसरी म कलाकारिता क्षेत्रमा दुई वर्षदेखि लागिरहेको छु ।
अहिलेसम्म कतिओटा गीतमा मोडलिङ गर्नुभयो ?
३ दर्जनजति तीजका गीत, आधा दर्जन लोक दोहोरी गीतमा र २–३ ओटा आधुनिक गीतहरूमा अभिनय गरेकी छु ।
पवित्रा थापा भनेर चिनाउने गीत कुन हो ?
‘यसपालीको तीजमा तिम्रो नाम चर्चित हुने भो’ भन्ने तीज गीतले मलाई दर्शक, स्रोता माझ चिनएको छ । त्यो गीतलाई ऋषि खड्का र चन्दा अर्यालजीले गाउनुभएको थियो ।
कलाकारितासँगै अरू अरू के गर्दै हुनुहुन्छ ?
अध्ययन र कलाकारितालाई सँगसँगै अगाडि बढाई रहेको छु ।
छोटै समयमै तपाईंले चर्चा कमाउनु भयो नि ?
म, कलाकार रंजिता गुरुङको फ्यान थिएँ । उहाँको हाउभाउ धेरै मन पथ्र्यो । म पनि यसरी नै टिभिमा देखिने कसरी होला भन्ने महसुस हुन्थ्यो । अभ्यास गर्दै जाँदा पुरुषोतम पौडेल दाईले एउटा म्युजिक भिडियोमा खेल्न आग्रह गर्नुभयो ।
‘पूर्वेली नानीले, लजाउने बानीले’ भन्ने बोलको गीत थियो । त्यसमा अभिनय गरें दाईले राम्रो छ भन्नुभयो । मलाई पनि इन्ट्रेस भएको हुँदा केही गरौ न । फेरी मलाई पवित्रा थापा भनेर नाम चिनाउन पनि थियो ।
कलाकारिताको नाममा नेपाली संस्कार मेटाउने गरि कलाकारहरूले आपूmलाई नङ्ग्याएर विकृति ल्याएका छन् भन्ने आरोप लगाइन्छ नि ?
मलाई नेपाली भेषभुषा नै मनपर्छ । साडी–चोली लाउन मनपर्छ । मलाई नेपालीले मन पराउने रहन–सहन र संस्कार–संस्कृति मनपर्छ ।
नेपाली मौलीक परम्परा मनपर्छ । मेहनत गरेर आफ्नो कला र क्ष्मताले हिट हुनु र नाङ्गीएर हिट हुनु फरक कुरा हो । तर यहाँ कसैले हिट हुनलाई त्यस्तो गरेहोला त्यो केही समय मात्र हो । केही समयपछि त्यस्ता कलाकार हराएर जान्छ ।
अड्ड देखाएर हिट हुने त क्षणिक मात्र हो । तर सबै कलाकार त्यस्तो हुनुहुन्न । बरु मेहनत गरेर एक वर्षमा एउटा मात्र भिडियोमा राम्रो गर्नु र हाम्रो समाजलाई सुहाउँदो गीतमा अभिनय गर्नु राम्रो हो ।
ट्रम्पले जेरुसेलमलाई इजरेलको राजधानीको मान्यता दिएपछि प्यालेस्टिनीहरु आन्दोलनमा, विश्वबाट एक्लियो अमेरिका
विप्लव : समस्या कि समाधान ?
भारतीय माअाेवादीका सेनाहरू ।
चीन र रूसका सैनिकहरू संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्दै ।
उत्तर काेरियाली सैनिकहरू पछिल्लाे सफल IBM मिसाइल परीक्षणपछि ।
चीनकाे ग्वाङ्जाअाे शहर । जहाँ ग्लाेबल फाेरमकाे अायाेजना हुँदैछ ।